Ukuba ufana nam, uyaqhubeka nokuhlawula loo mali yokubhaliswa kwegama lesizinda rhoqo ngenyanga kodwa uzibuze ukuba uza kuyisebenzisa na okanye ukuba ukhona umntu oza kuqhagamshelana nawe ayithenge. Kukho iingxaki ezimbalwa apho, kunjalo. Okokuqala, hayi… awuzukuyisebenzisa. Yeka ukuzidlahlekisa, kukudla imali eninzi minyaka le kungekho mbuyekezo kutyalo-mali. Okwesibini, akukho mntu waziyo ukuba uyayithengisa-ke uza kuzifumana njani izibonelelo?
Kudala ndiyenza le nto kwaye ngumbuzo onzima lowo. Umthengisi unokubona ukuba yinkampani okanye umthengi osisityebi othengayo kwaye axoxisane ngexabiso elikhulu lokuthenga. Okanye umthengisi unokuba engenalwazi kwaye avumele igama elikhulu lesizinda lihambe ngokungakhathali nantoni na. Sithengile sathengisa itoni yamagama esizinda kwaye ihlala iyimeko yoxinzelelo. Kukho imigaqo elula efana nemimandla emifutshane engenadeshi okanye amanani ahlala esenza kumnandi. Amagama ama-domain amade anamagama angabhalwanga kakuhle akenzi njalo.
The TLD .com isenexabiso ngakumbi kuba lilinge lokuqala ngaphakathi kukhangelo okanye kwisikhangeli ukufumana indawo. Ukuba i-domain eneneni yayinomxholo kwaye yaqhuba iziphumo zokukhangela (ngaphandle kokuba iyindawo ye-malware okanye iphonografi), kunokuba yinto efanelekileyo kwinkampani izama ukuqhuba itrafikhi eyongezelelweyo okanye igunya kwigama labo.
Umthetho wethu wesithupha unyanisekile kuthethathethwano. Ndiya kuhlala ndicebisa ukuba umthengi enze ibhidi yokuqala yokubonelela umthengisi ngempendulo kwangoko malunga nokuba intengiselwano izakufaneleka na. Njengomthengi, sinokuxela ukuba siyathenga egameni lomntu wesithathu kuba banqwenela ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo ngaphandle kokuhlawula kakhulu. Sikwazisa umthengisi ukuba sinqwenela ukuhlawula oko kufanelekileyo ngaphandle kokukrazula umthengisi. Ekupheleni kwengxoxo, omabini amaqela ahlala onwabile.
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2016 ngo-8: 56 PM
Isithuba esihle kakhulu ngengcebiso enkulu. Kubiza iindleko ngakumbi ukulahla loo mimandla ingasetyenziswanga kunokuhlala uhlawula umrhumo wonyaka rhoqo nangaphezulu.